ဆိုက်ဘာလိင်စွဲလမ်းမှု၊ ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုဝါဒ၊ လိင်သဘောထားနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှလိင်အကြမ်းဖက်မှုများအတွက်အခွင့်အလမ်းများ (၂၀၀၇) - Your Brain On Porn
Taehan Kanho Hakhoe Chi ။ 2007 Dec;37(7):1202-11.
Koo hy1, Kim ကအက်စ်အက်စ်.
ဒီလေ့လာမှုကမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဘာစွဲ, ကျား, မသာတူညီမျှ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုစရိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, ဤ variable တွေကိုတို့တွင်ဆက်ဆံရေးကိုသိရှိနိုင်ဖို့ပြုလေ၏။
သင်တန်းသားများကိုခဲ့ကြသည် နှစ်ခုအလယ်မှာကျောင်းများနှင့် Seou အတွက်အမြင့်သုံးကျောင်းများအနေဖြင့် 690 ကျောင်းသားများကိုl ။ ဒေတာကိုတစ်ဦးကျဘာစွဲအညွှန်းကိန်းမြီးကောင်ပေါက်တစ်ကိုရီးယားကျား, မသာတူညီမျှစကေးတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားကိုစကေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုစရိတ်များအတွက်စကေးထည့်သွင်းထားတဲ့ Self-အစီရင်ခံစာမေးခွန်းကတဆင့်စုဆောင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါဒေတာ SPSS အစီအစဉ်ကိုသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်များ၏, 93.3%, ဘာစွဲခံနေရမဟုတ်သိရသည် 5.7% 0.4% အတန်အသင့်စွဲနှင့် 0.6% ပြင်းထန်စွာစွဲ, ရစေရန်စွဲဖြစ်ခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘာစွဲ, ကျား, မသာတူညီမျှ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုစရိတ်ယေဘုယျလက္ခဏာများသည်နှင့်အညီကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်။ ကျား, မသာတူညီမျှ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုစရိတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းမြီးကောင်ပေါက်များ၏ကျဘာစွဲ.
ကျား, မသာတူညီမျှ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုစရိတ်ကျဘာစွဲကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, ဘာစွဲ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သူနာပြုကြားဝင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်မြီးကောင်ပေါက်မှပေးအပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မြီးကောင်ပေါက်မှလိင်မဩဝါဒပေးဘို့မတူညီအစီအစဉ်များကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်ပေးအပ်ရပါမည်။